Wararka Maanta: Isniin, Jun 25, 2012-Qaraxyo ka dhacay Magaalada Mombasa ee dalka Kenya oo Sababay khasaare isugu jirta Dhimasho iyo Dhaawac
Qaraxyadan oo loo adeegsaday bambooyinka gacanta ayaa xalay abaare 10:00 habeenimo lagu weeraray baar lagu daawanayay ciyaar ka mid ah kuwa horyaalka Yurub oo dhexmaray dalalka Talyaaniga iyo Ingiriiska.
Dadkii ay dhaawacyada kasoo gaareen qaraxa ayaa waxaa goobta ka qaaaday gaadiidka gurmadka deg-degga ah kuwaasoo isbitaal guud ee Mobasa halkasoo lagu daweynayo.
Goobjoogayaal ayaa sheegay inuu arkay gaari ay wateen laba nin iyo haweeney, kuwaasoo lug ku maray baarka hortiisa, waxyar kaddibna waxaa la maqlyay bay yiraahdeen qaraxyo waaaweyn oo isdaba-joog ah.
"Markuu qaraxii koowaad dhacay waxaan moodayay inay koronto qaraxday, waayo waxaa jiray dhibaato dhinaca kororntada ah, laakiin daqiiqado kaddib waxaan maqlay qarax kale waxaana xigay qarax saddexaad, markaas ayaan ogaaday inay dhaceen qaraxyo," ayuu yiri Emmanuel Omondi oo ku sugnaa meel ku dhow halka lagu weeraray bambooyinka.
Taliyaha ciidanka booliiska Mombasa, Aggrey Adoli oo ay wehliyaan kooxda la dagaalanka argagaxisada iyo kuwa dambiyada baara ayaa goobta tagay, iyagoo sheegay inay wadaan baaritaanno, ayna dib ka bixin doonaan faahfaahinta.
Qaraxyadan ayaa waxay imaanayaan xilli maalin ka hor uu Mareykanku ka digay inay ka dhici karaan magaalada xeebta ku taalla ee Mombasa weeraro argagaxiso, iyadoo dowladda Kenyana ay shalay adkeysay amaanka magaaladaas.